Mid kamida qorshayaashii Farmaajo ee doorashada oo u hirgalay | KEYDMEDIA ONLINE
Mid kamida qorshayaashii Farmaajo ee doorashada oo u hirgalay
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo oo aad u doon-doonayay inuu saameyn ku yeesho doorashada Jubbaland ayaa ku guuleystay mid kamida qorshayaashiisii.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa u xusul-duubayay sidii uu saameyn weyn ugu yeelan lahaa doorashada degaan uu si gaara uga xushay deegaannada kale, taasoo ah meesha kaliya ay ku badan yihiin reerka uu kasoo jeedo madaxweynaha.
Shirarkii badnaa ee dhex maray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxay u burburayeen arrinta gobolka Gedo oo muran xoog leh uu u dhaxeeyay hogaamiyaha maamulka Jubbaland iyo madaxweyne xilkiisa dhamaaday ee Farmaajo.
Farmaajo marnaba kama uusan tanaasulin arrinta gobolka Gedo ilaa ugu dambeyn laga wareejiyo ka qeyb galka iyo talada shirka arrimaha doorashooyinka oo markii dambe uu la wareegay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday oo aan marnaba raalli ku ahayn heshiis aan laga talagalin ayaa ugu dambeyn aqbalay in amniga doorashada Garbahaarey oo ah degmada ay ku badan yihiin reerkiisu la hoos keeno isaga, oo laga madax-banneeyo Jubbaland iyo Axmed Madoobe.
Sida ka muuqata Jaantuska hoose, dhammaan dowlad goboleedyada kale ee afarta ah, amniga doorashooyinka iyaga ayaa maamulaya, labada goobood ee doorashada loo qorsheeyay in ay ka dhacdo dowlad goboleed kasta, waxaa maamulaya isla dowlad goboleeka, balse degmada Garbahaarey waxay toos u hoos imaanaysaa Xarunta dhexe ee Hawlgallada doorashooyinka.
Arintaan ayaa ka dhigan in la fuliyay mid kamida waxyaabihii uu ku haminayay Farmaajo oo ah in isaga la hoos keeno amniga doorashada Garbahaarey si uu kuraasta xildhibaanada ee halkaasi taal uu isagu umaamusho, meeshana uga saaro Axmed Madoobe iyo xulafadiisa.